Tetikasa mahomby |
Fampiasana tsara ny milina fanodinana zezika
tamin'ny admin tamin'ny 2020-09-22
Ny masinina zezika biolojika dia manana andraikitra betsaka, mila mampiasa azy tsara daholo isika rehetra, tsy maintsy mahafehy ny fomba marina ianao amin'ny fampiasana azy. Raha tsy takatrao ny fomba marina, ny masinina manodina zezika voajanahary dia mety tsy hampiseho ny andraikitra feno, noho izany, inona no fampiasana marina ny t ...
Inona no tokony homarihina rehefa mampiasa sy miasa ny granulator?
Inona no tokony homarihina rehefa mampiasa sy miasa ny granulator? Andao hojerentsika izany. Fanamarihana: Aorian'ny fametrahana ny masinina mifanaraka amin'ny fepetra takiana dia ilaina ny manondro ny boky fiasa alohan'ny hampiasana azy, ary tokony ho fantatrao ny firafitry ny masinina ...
Ahoana no hiatrehana ny olan'ny crusher?
Amin'ny dingan'ny fampiasana ilay crusher, raha misy ny lesoka, ahoana no hiatrehana izany? Ary andao jerena ny fomba fitsaboana ny lesoka! Ny motera crusher vibration dia mifandray mivantana amin'ilay fitaovana fanosehana, izay tsotra sy mora tazonina. Na izany aza, raha tsy mifamatotra tsara ny roa ...
Tombony amin'ny fampivoarana haingana ny fitaovana zezika biolojika
Fitaovana zezika biolojika dia fandaniam-bola amin'ny tetikasa harena, ny zezika zezika voajanahary dia tsy vidin'ny fidirana ambany fotsiny, fa koa tombony ara-toekarena tsara, ary mamaha ny olan'ny fahalotoan'ny tontolo iainana miaraka amin'izay. Ankehitriny dia hampahafantatra ny tombony amin'ny d ...
Ny fitaovana famokarana zezika voajanahary dia afaka mampihena ny fahalotoan'ny fambolena
Ny fitaovana famokarana zezika voajanahary dia afaka mampihena ny fandotoana ara-pambolena amin'ny fomba mahomby amin'ny fambolena sy fiompiana. Ny fandotoana ny fambolena dia tena matotra be ...